‘सुन्तला गाउँ’ बन्यो सिगाना… ! — Newskoseli
रामबहादुर थापाबागलुङ, १३ पुस ।
वि.सं. २०३७ ताका आफ्नो गाउँमा सुन्तला खेती गर्ने एक्लो किसान थिए टोपबहादुर खड्का । अन्नबाली छाडेर सुन्तला लगाउँदा कतिले त उनलार्इ खिस्सी पनि गरे ।
सुन्तलाबाट के आम्दानी होला र भन्ने आशंका थियो । सुन्तलाले व्यावसायिक सफलता दिलाउला भन्ने कमैले सोचेका थिए । तर, सो गाउँमा अहिले सुन्तला खेती बढ्दै गएको छ । आम्दानीको भरपर्दो स्रोत हुँदै गएपछि सुन्तला लगाउने किसानको संख्या क्रमशः बढ्दो छ ।
बिरुवा थप्दै जाने र उत्पादन लिने क्रम पनि बढिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । गाउँमा सुन्तला लगाउनेमा अहिले खड्का मात्रै एक्लो छैनन् । गाउँका झन्डै डेढ सय किसान सुन्तला खेतीमा लागेका छन् । बागलुङ नगरपालिका– ८, सिगाना ‘सुन्तला गाउँ’ को उपनामले चिनिन थालेको छ ।
‘सुरुमा सुन्तला खेती गर्दा म एक्लै थिएँ,’ ६० वर्षीय खड्काले भने– ‘अहिले त गाउँभरि नै सुन्तलै–सुन्तला छ ।’ खड्काले सुरुमा सय बोट लगाएर सुन्तला खेती थालेका हुन् । अहिले उनको बगैंचामा नयाँ–पुराना गरी २ सय वटा सुन्तलाका बोट छन् । वर्षमा चार लाख रूपैयाँको सुन्तला फल्ने खड्काको भनाइ छ ।
अर्का अगुवा किसान अनन्त खड्काले पनि ८ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् । ‘सुन्तलाबाट वार्षिक ३–४ लाख रूपैयाँ कमाई हुन्छ’– उनले भने । अनन्तले पनि वि.सं. २०३८ देखि सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् । वडास्तरीय कृषि समितिका अनुसार सिगानामा १ हजार रोपनीमा सुन्तला खेती भइरहेको छ । गत आ.व. मा ८२ लाख रुपैयाँको सुन्तला सिगानाबाट बाहिरिएको आँकडा समितिसँग छ ।
असिनाले चुटेका कारण यस वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको समितिका अध्यक्ष रेशम थापाले बताए । ‘यो वर्ष करिव ६५ लाखको सुन्तला फलेको अनुमान छ’– उनले भने । काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता ठूला सहरबाट आउने व्यवसायीले सिगानाका सुन्तला खरिद गर्छन् । ‘कहिलेकहीं बगैंचा नै ठेक्कामा बिक्री हुन्छ,’ थापाले भने– ‘टिपेर बेच्दा प्रतिकिलो ५० देखि ६० रूपैयाँसम्म पर्छ ।’
साना ‘डोके व्यापारी’ ले पनि किसानसँग सुन्तला किनेर बजारमा ल्याई बेच्ने गरेका छन् । सिगानामा वर्षेनि सुन्तला खेती विस्तार हुँदै गएको छ । गत आ.व. मा मात्र १४ हजार नयाँ बिरुवा रोपिएका थिए । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग भएमा सुन्तला खेती अझै बढाउने सोचमा किसान छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ‘सुन्तला जोन’ कार्यक्रममा सिगाना पनि समावेश छ । सुन्तलाको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने ‘सुन्तला जोन’ का प्रमुख बमबहादुर थापाले बताए । सन्तुला उत्पादनका लागि सिगाना उर्वर ठाउँ भएको उनले उल्लेख गरे ।
किसानले कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट समेत सहयोग पाएका छन् । आयोजनाको १० लाख रुपैयाँ अनुदानमा स्थानीय सिर्जना बहुउद्देश्यीय कृषक समूहले सुन्तला भण्डारणका लागि ‘सेलर स्टोर’ बनाएको छ । अन्नबालीभन्दा सुन्तला खेती गर्दा नगद आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् ।
बागलुङमा करिव ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । सिगानासँगै बिहुँ, तित्याङ, दमेकलगायतका ठाउँ सुन्तला खेतीका लागि ‘पकेट’ मानिन्छन् । रासस